Dowladda Oo Wada Qorshe Si Fuduud Looga Faaideysanayo Biyaha Roobka Ee iska Fariista Wadooyinka – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Dowladda Oo Wada Qorshe Si Fuduud Looga Faaideysanayo Biyaha Roobka Ee iska Fariista Wadooyinka
Agaasimaha guud ee wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya C/qaadir Maxamed Aadan ayaa maanta shan gaari ku wareejiyay wasaaradaha Maaliyadda, Xannaada Xoolaha iyo Xafiiska arrimaha degaanka ee xafiirka ra’iisul wasaaraha.
Gaadiidkan ayaa qeyb ka ah mashruuca horumarinta biyaha ee Biyoole, oo hadda ka socda dowlad goboleedyada; Galmudug, Puntland iyo Koofur Galbeed, iyadoo dhowaan laga bilaabi doono Soomaaliland.
U jeedada laga leeyahay mashruuca ayaa ah in lagu horumariyo biyaha, xoojinta tayada hey’adaha dowladda isla markaana laga faa’ideysto roobabka, sidoo kalena la sameeyo qorshihii lagu celin lahaa biyaha togagga isaga shubma xilli roobaadka.
Waxaa hadda la soo gebo-gabeey wajiga 1-aad oo dhinac Puntland oo 6 goobaad oo biyo celin laga samaynayo iyo afar goob-biyood oo la dayac tirayo. Halka Galmudug iyo Koofur Galbeed ay mar dhow la bilaabi doono asteenta goobaha biyo celinta laga samaynayo.
Waxaa sidoo kale wax laga qaban doonaa baahida biyaha deegaannada aan toggagga lahayn balse leh fursad biyo celin ama biyo soo saarid, tas oo ahmiyadd u leh dalka.
Mashruuca Biyoole ayaa tusaale u noqan-doona mashaariicda laga hirgeliyo Soomaaliya maadaama laga gaaray guulo hordhac ah oo ku aaddan wax qabadka baahida horumarineed ee bulshada.